Huawei P30 Lite ga - enweta ụdị agba agba na - agba ume | Gam akporosis
Huawei P30 Lite ga - enweta ụdị agba agba na - eku ume
Huawei na-aga ẹkedori ọhụrụ na ọhụrụ version nke P30 ọkụe. Nke a agaghị agwakọta nhazi nke RAM na ROM dị iche na nke ndị a mara ama, mana ọ ga-agbakwunye ọhụụ ọhụrụ na mobile ekele maka imecha Na-eku ume Crystal a ga-egosipụta na azụ azụ nke otu.
Onye ama ama ọnụ mmiri Roland Quandt na-ahụ maka ikpughe ọbịbịa nke ihe nlere a, ma o mere ya site na ụzọ Winfuture, nke bụ ebe ọ na-ebipụta ọtụtụ akụkọ nkwupụta ya. Agwa a, na mgbakwunye na ikpughe ozi ahụ, gụnyere ọtụtụ nsụgharị nke ụdị dị iche iche.
Na-eku ume Crystal mbipụta nke Huawei P30 Lite mejupụtara a gradient ụda n'azụ imecha na-aga site na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọkụ na-agwụ na a ụdị nke rọrọ odo odo na agba. Ihe oyiyi ndi Quandt biputara bu ndia:
Enweghị nkọwa ọ bụla na ọnụahịa na nnweta nke Huawei P30 Lite a na agba ume Crystal, ma, ebe ọ bụ na nke a bụ ihe ngosipụta izizi doro anya ọbịbịa ya, anyị nwere olile anya na ụbọchị ma ọ bụ izu na-abịanụ a ga-eme ya ọkwa. Anyị na-eche na China ma ọ bụ India - ọ nwere ike ịbụ abụọ - ga-abụ ahịa mbụ iji nweta ha. Agbanyeghị, iji ghara inwe nchekwube, anyị na-ebu amụma na ụlọ ọrụ China ga-eweta ya n'ụwa niile. Nke a bụ ihe anyị ga-akwado ma ọ bụ jụ.
Dị ka nyocha, ngwaọrụ a dị n'etiti na-eji ihuenyo FullHD + nke nwere 2,340 x 1,080 pikselụ mkpebi na 6.15 sentimita diagonal, isi asatọ Kirin 710 processor, 4/6 GB ikike RAM, ohere nchekwa nke 128 GB na batrị nke 3,340 mAh na nkwado maka ịgba ụgwọ ngwa ngwa. O nwere igwefoto okpukpu atọ nke 24 MP + 8 MP + 2 MP na onye na-agbapụ 32 megapixel maka selfies, ihu ihu na ndị ọzọ, yana onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei P30 Lite ga - enweta ụdị agba agba na - eku ume
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-ebupụta na Playlọ Ahịa Google
A haziri nke Google akwu Obere na nkwado ka kpọgidere mgbidi na 3,5 mm jaak kwadoro